Federeeshinichi maatii deeggartoota kilaba Faasiil lubbuu isaanii dhabaniif deeggarsa Birrii kuma 100 laate – Fana Broadcasting Corporate
Federeeshinichi maatii deeggartoota kilaba Faasiil lubbuu isaanii dhabaniif deeggarsa Birrii kuma 100 laate
Finfinnee, Gurraandhala 4, 2011 (FBC)- Federeeshiniin kubbaa miilaa Ityoophiyaa maatii deeggartoota kilaaba Faasiil lubbuu isaanii dhabaniif deeggarsa Birrii kuma 100 godhe.
Federeeshinichi guyyaa har’aa walitti qabaa boordii kilabichaa magaala Goondaaritti argamu Dooktar Muluqan Adaanaatti maallaqa maatii namoonni jalaa du’aniif oolu; Birrii kuma 100 kenneera.
Dhimmicharrattis Instiraaktar Sawunnat Bishaaw, obbo Zarihuun Qaqqaboo fi koomiishinarri Koomiishinii Ispoortii naannoo Amaaraa Baazzazaw Caannee dabalatee hoggantoonni kilabichaa argamuu odeeffannoon kilaba Faasiil irraa arganne ni muul’isa.
Tapha kilabni isaanii kilaba Bahir Daar waliin gaggeesse daawwatanii yemmuu gara magaalaa Goondaritti deebi’an konkoolaataan isaan ittiin imalan garagaree lubbuun deeggartootaa darbuun isaanii ni yaadatama.
Filiippee Kootiinhoon waliigaltee ergisaa waggaa tokkootin Baayarn Muuniikitti makame
Gulaallii duraa waancaa addunyaa 2022 Leesseettoo waliin taasifamuuf taphattoonni 24…
Jila Ityoophiyaa tapha guutuu Afrikaa 12ffaarratti hirmaatuf gaggeessaan taasifame
Ashandaa sababeeffachuun dorgommiin fiigicha dubartootaa kiilo meetira 5…